Warbixin: 13 sano kaddib maxaa Puntland ka hirgalay. – Radio Daljir
Warbixin: 13 sano kaddib maxaa Puntland ka hirgalay.
Puntland, January, 16 – 8-dii January sanadkii 2009 ayay ahayd markii hoggaanka Puntland loo doortay madaxweyne C/raxmaan Shiikh Maxamed Maxamuud ?Faroole? waxaana haatan laga joogaa xilligaasi muddo gaarayasa 3 sano.
Haddaba waxaan warbixinteena ku iftiimin-doona maxaa ka qabsoomay himilooyinkii ay ku taamayeen shacabka reer Puntland, iyo balan-qaadyadii madaxwayne Faroole uu shafka u tumay xilligii uu kuguda jiray loolanka doorashada hoggaanka Puntland, iyo waxyaabihii ugu waawaynaa ee 3dii sano u qabsoomay dawladda uu hoggaamiyo madaxwayne C/raxmaan Shiikh Maxamed Maxamuud Faroolle.
Qayta hore ee warbixinteena ayaa ku qaadaa dhigi doonaa siyaasadii uu lasoo shir-tagay inuu ku hoggaamin doona shacabka Puntland madaxwayne faroole xilligii loolanka doorasho lagu jiray, iyadoo ay jireen ballanqaadyo faro badan oo uu ka dhabeeyay madaxwaynuhu halka ay wali-jiraan arrimo wali ay tabayaan shacabka ku dhaqan gobollada Puntland.
Khud-bad dheer oo socotay 15-daqiiqo ayuu madaxwane Faroole ka jeediyay hoolka baarlamaanka Puntland bishii January ee sanadkii 2009-kii xilli uu ahaa marashax u tartamaya xilka madaxwaynenimo ee Puntland, waxaana khud-badaasi kala sinaa dhammaan murashaxiinta loolanka kula jirtay, iyadoo halkaasi uu ka jeediyay Dr Faroole taariikh dheer oo ka waramaysa waxbarashadiisii, shaqooyinkii uu soo qabtay heerka tacliintiisa, waayo-aragtinimada uu leeyahay, iyo sidoo kale haddii loo doorto hoggaanka Puntland waxyaabaha uu qaban-doono.
Puntland waxay u taagan-tahay midnimada ummada Soomaaliyeed, waxaana dhammaan khudbadihii uu kalsoonida baarlamaanka ku kasbaday madaxwayne Faroole ka mid ahaa adkaynta xiriirka DFKS, iyo ka qayb-galka shirarka dib-uhishiisiinta dalka Soomaaliya, waa kan madaxwayne Faroole kaddib markii ay doorteen golaha wakiilada Puntland 8-dii bishii January 2009-kii.
Arrimaha uu ka dhawaajiyay dr Faroole ayaa waxaa la xusi karaa inay wax-badan ka qabsoomeen, balse qodobka soo celinta gobolka Sool oo uu shafka u tumay xilligii loolanka doorasha Puntland ayaa waxaa wali tabaya bulsho badan oo ku dhaqan gobollada Puntland.
Dhammaan murashaxiintii loolanka adag kula jiray madaxwaynaha Puntland Dr C/raxmaan Faroole waxaa ay isku aragti ka ahaayeen inay Puntland kusoo dabaalaan isbadel iyo hoggaan-siyaasadeed, waxaana ay si adag madaxwayne Faroole ugula dar-daarmeen inuu sida ugu dhaqasaha badan u taabo-galiyo nidaamka asxaabta badan, si shacabka Puntland ay u helaan fursado ay codkooda ku muujiyaan.
Waa kan Nuuradiin Axmed Diiriya oo ka mid ahaa raggii ugu cad-caddaa murashixiinta Puntland oo hirgalinta nidaamka asxaabta badan ka codsanaya madaxwayne Faroole Isla bishii January bartamaheedii sanadkii 2009-kii qado sharaf uu marashaxiinta xilligaasi uu u sameeyay madaxwaynaha Puntland Dr C/raxmaan Faroole.
Haddaba siyaasad, amni, dhaqaale iyo hormar maxaa 3-sano kaddib Puntland u qabsoomay Ammaanka Xukuumadda Puntland ee xilligaan talada haysa waxay waxqabadyada dhanka ammaanka ka samaysay hormar la taaban-karo, waxaana si loo sugo nabad-galyada gobollada Puntland la sameeyay cutubyo kale duwan oo ciidamo ah, sida ciidanka booliska, ciidanka birmidka, ciidanka asluubta ee ilaalida xabsiyada, ciidanka SPU-yada ee illaalinta shaqaalaha ajaanibta ah, ciidanka daraawiishta, ciidanka ilaalada xeebaha Puntland, iyo ciidanka loo yaqaan Puntland Intelligence, security (PIS). Waxaana dhammaan cutubyadaasi mid kastaa uu ku hawlan-yahay sidii qaybtiisa uga adkaan lahaa.
Xukuumada Puntland waxay ku guulaysatay inay door-wacan oo taariikhda baal-dahab ah ka galay ka qaadatay xiriirka caalimiga ah iyo siyaasadda arrimaha dibadda, waxaana taariikhd Puntland markii ugu horaysay lagu cusumay shirar muhiim ah oo looga arrinsanayay mushkilada arrimaha Soomaaliya iyo dhibaha burcad-badeeda, tusaale ahaan shirkii lagu qabtay Istaanpul oo ay kasoo qayb-qaateen dhammaan madaxda caalamka, Puntlandna ay door-wacan ka ciyaartay shirkaasi.
Wanaajinta xiriirada caalimga ah iyo wadashaqaynta dawladdaha dariska la ah Soomaaliya ayaa Puntland door-wacan ka ciyaartay, waxaana safaro Puntland ku yimid madax caalami ah oo uu ka mid ahaa wakiilka QM u qaabilsan arrimaha bini?aadatimida Mark Bawdan, ergiga Soomaaliya u qaabilsan siyaasadda ee Dr Augustine Mahiga, iyo madax ka socotay dalalka qaaradaha dunida.
Dhanka Siyaasada arrimaha guddaha ayaa Puntland waxay ciyaartay door-muuqda oo marag madoon ah, waxaa daliil u ah shirarkii heer qaran ee lagu qabtay magaalada Garowe.
Markii ugu horaysay 23-sano kaddib ayaa Garowe waxaa lagu qabtay ciyaaraha gobollada Soomaaliya, koobkaasi oo ay kasoo qayb-qaateen 18-ka gobol ee Soomaaliya taasina waxay noqotay mid samcad iyo guul-wayn u noqotay shacabka Puntland.
Shirkii culu?aamudiinka Soomaaliyeed ee looga arrisanayay wadiiqada dacwada iyo islaaxa kaasi oo muddo 7-barri ah ka socday magaalada Garoowe.
Shirarkii heerka qaran ee haween-waynaha Soomaaliyeed kuwaasoo haweenka ku hadlaa Af-soomaaligu ay uga arrinsayeen danaha haweenka Soomaaliyeed.
Iyo shir-waynihii heerka qaran ee looga arrinsayay Dastuurka, kaasi oo 21-kii December sanadkii tagay ee 2011 lagu qabtay magaalada Garowe,
Dhammaan shirarkaasi heerka qaran waxay suuro-galiyeen in Puntland ay samcad ballaaran oo lama illaawaan ah ay ka gasho taariikhda Soomaalida, taasina waxay muujinaysaa mabaa?diidii lagu aas-aasay Puntland oo qeexaysa inay noqoto Puntland hooyadii Soomaaliyeed.
Qodoboka ugu wayn dhanka Hormarka ee ay ku tillaabsatay xukuumadda madaxwayne C/raxmaan Faroole ayaa ah isku-dayga hirgalinta nidaamka asxaabta badan, waxaana madaxwaynaha iyo guddoonka golaha wakiilada Puntland ay magacaabeen 8 xubnood oo loogu magac-daray guddiga doorashada kumeel-gaarka Puntland, kuwaasoo mar horeba baarlamaanka Puntland soo gaarsiiyay xeerka iyo nidaamka doorashooyinka asxaabta badan ee Puntland. Waxaana ka gud-bida mar-xalada qabaligu ay suuro-galinaysaa shacabka Puntland inay doorashooyin xor ah oo xalaal ah ay codkooda ku dhiibtaan.
Dawladda Puntland waxay dadaal xooggan u gashay sidii ay xalin-lahayd dagaalada qabiliga ku salaysan oo noqday kuwo marar badan soo noq-noqday, waxaana ay xukuumaddu arrintaasi la gaashatay indheer-garadka iyo isimada Puntland oo dadaal xoogan u galay daminta colaadahaasi, iyadoo dhanka kalena madaxwayne Faroole uu sheegay dagaalada qabaa?iladu inay dawladda ka hor istaageen dhankii hormarka.
Dadaalada dhanka hormarka ee xukuumadda Puntland ay ku tilaabsatay ayaa la xusi karaa hishiisyo ganacsi oo caalimiya, kuwaasoo khayraadka dabiiciga ah ee dhulka Puntland siyaabo kale duwan looga faa?iidasyto, waxaana tilaabadaasi xukuumadu ku tilmaamtay midda kaliya ee looga bixi karo faqriga, gaashada, iyo shaqo-la?aanta baahsan ee haysata dhalinyarada Puntland iyo kuwa Soomaaliyeed-ba.
Inkastoo dadaaladaasi xooggan ay dawladda madaxwayne Faroolu ku tilaabsatay haddana waxaa jira himilooyinka laga dhawrayo hirgalintooda, sida taabagalinta tubka dimuqraadiyadda Puntland, midaynta gobollada Puntland, adkaynta nabad-galyada guud ee Puntland, wanaajinta xiriirka DFKS, soo celinta gobollada ka maqan ee Puntland, iyo kas-bashada kalsoonida shacabka Puntland.